Ukuba nithanda imizi metro enkulu, ingakumbi abasuka kwiindawo ngamazwe ngoko umthande Hong Kong Tower umdlalo slot esekelwe phezu kweenqaba ezinde ezintathu kulo lonke China. le 5 bayotywe zokubeka mobile umdlalo simisiwe ulungelane nembono entle umzi ngezantsi nenqaba ende. Lo mbala yonke eluhlaza kunye eyoyikekayo ukukhanya ebusuku ukuba likwancedisa isihloko. Isandi kuvuthuza umoya kunye nentshukumo busy zendlela ngezantsi anezandi rhoqo kwakhala zamapolisa kukwenza uzive umi phezu kwabo iinqaba. Lo mdlalo udlalwa nge mali Ubhejo kwe £ 0,20 zize ezona spin nganye onyukayo ku £ 100.
Malunga umbhekisi phambili Hong Kong Tower:
Umbhekisi phambili wesi zokubeka mobile umdlalo elk zomdlalo, yinkokheli ezintsha kushishino wekhasino okuvelisileyo imidlalo ezininzi zokubhala kubasebenzisi online. Yonke imidlalo zabo ithandwa kwaye wadlala kwiisayithi nabaqhubi eziliqela kunye apps mobile ngabasebenzisi ehlabathini lonke.
Isimboli umdlalo kule zokubeka mobile zibandakanya i igolide 7, nedayimani blue, njengentyantyambo Lotus kunye nomthi bonsai ukuba ukwakha isimboli top ixabiso isiseko slot. inombolo 7 ngegolide kuza ngowona 1500 amaxesha Mbethelele 5 lihlala uphawu olunye payline. Kukho ezintlanu imiqondiso Chinese eziyimibalabala random ukuba abo ixabiso elingaphantsi. Umdlalo logo kunye oluhlaza & elibomvu yin-yangs amele iisimboli bonus yomdlalo.
Mystery Faka Uphawu: Xa ezintathu iisimboli umdlalo logo kuvela ukuma eDibanisa okuninzi yokugubungela esondweni, ukuba kugxile ukutyhila kwelinye uphawu. Kwakhona zityhila zibe blue yin-yang xa kwenzeka, ufumana ukudlala kwinqanaba bonus kunye 2 ubomi eyongezelelweyo Jackpot lokuwina ithuba.
Bonus Game Ilam: I elibomvu yin-yang ofuzisela usichithachithe ezintathu okanye ngaphezulu ukugaleleka kwabo ichukumisa umdlalo ibhonasi. lihlala abane kukunika entry umdlalo bonus kunye ubomi eyongezelelweyo lihlala emihlanu 2 ubomi extra ukudlala kwemijikelo jackpot.
Wheels zezulu: Lo umdlalo Jackpot yale zokubeka mobile umdlalo apho ufumana ukujija isondo elikhulu ngamanani kwezabelo okhankanywe kuwo. Kukho imiphakamo emithathu apha; kwinqanaba lokuqala ikunika ukuwina max of 2000 amaxesha isibonda elandelwa 10,000 amaxesha ngesibonda ngumphakamo wesibini kunye nenqanaba Esesithathu nesokugqibela inika ube sethubeni lokuphumelela i ephezulu 50,000 amaxesha yesiteki yakho.
le zokubeka mobile umdlalo inika elona nani liphezulu kwezabelo awinileyo kunye iimpawu bonus eziliqela ungazuza. Uyakwazi ngokuqinisekileyo nethemba ukufumana imali ethile enkulu xa udlala ijikelezisa ezimbalwa kule slot.